Akụkọ - A na-eme Ka A Na-eme Mbelata Mmiri Kwa Afọ Ọrụ Kwa Afọ
Ugbo ala ndi njem
Ihe oru ugbo na OTR tube
A na-eme Tubes na-eme Kwa Afọ na-eme Kwa Afọ
A na-eme ahịhịa mmiri na-eme kwa afọ na Satọde. Anyị na-egwuri egwu ọnụ, na-edugharị anụ oriri, na-abụ abụ ma na-agba egwu gburugburu ebe a na-egwu ọkụ. Ọtụtụ ndị enyi si mba ọzọ na-esonye na egwuregwu anyị na mmemme anyị. Anyị na-amasị ngwaahịa anyị na ọrụ anyị, anyị dịkwa ka igwe na-acha anụnụ anụnụ, igwe ojii na-acha ọcha, oké osimiri, hụrụ ndị ọrụ ibe anyị n'anya n'anya, hụ ndị ezinụlọ anyị na-ekpo ọkụ na-aga n'ihu n'anya, hụkwuo ndị enyi anyị na ndị mmekọ anyị si n'ebe dị anya n'anya. Nke a bụ nnukwu ọrụ ma na-atụ anya ị sonyere anyị n'afọ ọzọ!
Florescence akpa olileanya nwere ihe ahịa na-abịa na-eleta obodo anyị na ụlọ ọrụ, na-enwe ohere isonyere anyị na-egwu egwuregwu, ịmatakwu ihe ọ bụla ọzọ na-enwe fun ọnụ, na-atụ anya na-ogologo oge azụmahịa na onye ọ bụla ọzọ. Ka ọ dị ugbu a, anyị ga-ekekwu ohere iji gaa obodo ndị ahịa na ụlọ ọrụ maka nkwukọrịta ma maratakwu ihe ha chọrọ, iji melite ma gbasaa akara ngwaahịa na ogo ngwaahịa na ọrụ anyị. Na-atụ anya ọdịnihu ọhụụ na ndị ahịa ọnụ.
Qingdao Ifuru Co., ltd bụ ọkachamara n'ime tube emeputa na n'elu 26 afọ ngwaahịa ahụmahụ. Anyị ngwaahịa tumadi gụnyere butyl roba n'ime akpa maka ugbo ala, injinịa akpa na roba flaapu wdg anyị ụlọ ọrụ nwere 300 ọrụ (gụnyere 5 agadi injinia, 40 ajụ na agadi ọkachamara na oru pesonel) .The Company bụ a nnukwu-ọnụ ọgụgụ enterprise nke keukwu oge a. nyocha na mmepe, imepụta, ire ahia na oru. A na-enyefe ngwaahịa anyị karịa mba 20 n'ụwa niile, nke ndị ahịa ụlọ na ndị mba ọzọ kwadoro. Ọzọkwa, anyị gafere ISO9001: 2008 ihu ọma yana anyị nwekwara usoro nlekọta ọgbara ọhụrụ na sayensị nke na-enye ngwaahịa na ọrụ dị elu. Anyị na-ele anya ịmekọrịta mmekọrịta azụmahịa na-adịte aka na ndị ahịa anyị.
Post oge: Ọgọstụ-15-2020
160lọ 1608 Dingye International Mansion
Mba 54 Moscow Okporo ụzọ, Mpaghara Tradeing Free na Qingdao